Filtrer les éléments par date : samedi, 02 octobre 2021
samedi, 02 octobre 2021 11:08
Kojakoja fanaovan-trano : Niakatra avo telo heny ny vidiny
Raha oha-pitenenana teo aloha ny hoe "Tranoben'Antananarivo, izay mahavita aloha no manenina.", satria ny aty aoriana tsara sy lehibe noho ny taloha hatrany, ankehitriny, ny vao manao trano no manenina mahita ny hafa efa nahavita.
Niakatra nidangana avokoa ireo fitaovana kojakoja fanaovan-trano, manomboka amin'ny simenitra, ny vy sy ireo kojakoja samihafa.
Nahitana fiakarana avo in-droa ka hatramin'ny in-telo heny avokoa ny ankamaroany.
Raha ny fanadihadiana natao teo amin'ny mpivarotra mpaninjara, dia zara raha mahazo 1 000ar monja ny lasakan'ny simenitra 50kg, fa midangana ny akana azy, ary miovaova be ny vidiny.
Raha ny fanazavan'ireo mpanafatra mpambongady kosa, dia ny ladoany no mametra ny vidin'ny entana ankehitriny amin'ny fakany ny habatseranana, toy ny fiarakodia sy ny lavanila, ka ny fanjakana no mamaritra ny vidiny farany ambany, na dia mampiseho faktira nividianana azy mora kokoa aza ireo mpanafatra entana (Prix concerté).
samedi, 02 octobre 2021 11:06
Toliara : Hitarina ny seranan-tsambo, hisy Gare routière vaovao
Nomarihina tao Toliara ny andro manerantany ho an'ny Ranomasina. Naharitra roa andro ny hetsika, teo ambany fitarihan'ny Minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro Tinoka Roberto.
Nambaran'ity farany fa anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fanatsarana sy fampiroboroboana ny fitaterana an-dranomasina, firenena manana harena an-dranomasina maro i Madagasikara ... ary anisan'ny mampalaza ny Nosintsika ity izany.
Hatao hoy izy ny ezaka rehetra hanatsarana sy hampandrosoana an'ity seha-pitaterana iray ity.